Imisebenzi emi-4 okufanele yenziwe e-Autumn ngaphandle | Bezzia
Imisebenzi engu-4 okumele yenziwe ngaphandle kwe-Autumn
UMaria vazquez | 01/09/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 29/08/2021 23:45 | Ukuzilibazisa
Ukwindla kuletha amazinga okushisa aphansi kepha kumnandi ukujabulela imisebenzi yangaphandle. Hhayi ngoba kufika ukuwa kufanele siyeke lokhu sizikhiyele ekhaya. Kuningi imisebenzi okufanele yenziwe ekwindla okusivumela ukuthi sijabulele ubunye balesi sikhathi sonyaka.
Singacabanga ngezinhlelo eziningi esingazenza unyaka wonke kodwa lokho ekwindla zinombala okhethekile. Kungaba enkampanini noma uwedwa, abathandi bemidlalo yangaphandle bazokwazi ukujabulela izindawo ezingenakuqhathaniswa ngalesi sikhathi. Kepha kukhona neminye imisebenzi ekhululekile ongayijabulela kakhulu.
1 Izintaba odabula amapaki emvelo
2 Imizila yamabhayisikili enqamula i-greenways
Izintaba odabula amapaki emvelo
Ekwindla kusinikeza izindawo ezihehayo futhi lokho kwenza kube yisikhathi esikahle sokuvakashela elinye lamapaki emvelo amaningi ezweni lethu. Lokhu kusinikeza nemizila ehlukene ngakho-ke akunzima ukuvumelanisa ukuhamba ngezindlela zeqembu.
Ngabe udinga imibono ethile? Kuningi amapaki wemvelo ezibukeka zizinhle kakhulu ekwindla: iFraga de Catasós ePontevedra, eGorbeia ezweni laseBasque, e-Urbasa eNavarra, eSomiedo e-Asturias, ePicos de Europa eLeón, eMontseny eCatalonia, e-Arribes del Duero eZamora naseSalamanca, eCazorla, eSegura nase-las Villas in Jaén, the Sierra Nevada in Granada….
Uma uhamba nezingane Ungenza ukuhamba kube mnandi ngokwengeziwe ngokwenza okulula njengokuqoqa amaqabunga ekwindla, uwahlukanise ngamathoni amahlamvu awo, ekwindla azosuka kokuluhlaza kuye kophuzi nokubomvu. Ngemuva kwalokho, ungakhetha okuhle kakhulu bese uyomisa kumshini wokuzenzela ukwenza ubuciko obuhlukile ebusika.
Imizila yamabhayisikili enqamula i-greenways
Ngokushintshwa kwamahlamvu abe phuzi ne-ocher, kukhona ama-greenways aguquka ekwindla. Futhi kungani ungazitholi futhi ngebhayisikili? Bathi amabhayisikili awasehlobo kodwa amazinga okushisa ekwindla amnandi kakhulu ukujabulela lo msebenzi wokuzilibazisa, awuvumi?
ESpain kukhona Ama-2.000 amakhilomitha we-greenways, ngobuningi babo balandelwa emizileni yesitimela esidiliziwe yakudala. Njengoba iningi labo lilandela umzila wamathrekhi amadala, nawo ayisicaba, ngakho-ke ayizindlela ezijabulisayo zomndeni wonke.
ISierra de la Demanda Greenway phakathi kweLa Rioja neBurgos, iPlazaola Greenway eNavarra, iCarrilet Greenway ewela izigodi zesifunda sentaba-mlilo iLa Garrotxa, i-Oso Greenway e-Asturias kanye neGreenway yaseMonfragüe eCáceres, ngezinye zeziphakamiso. .
Ngokufika kwekwindla, inkathi yamakhowe eSpain iyaqala. Ngalesi sikhathi sonyaka bangaqoqwa i-boletus, i-morels, i-chanterelles, i-chanterelles, amacilongo okufa ... Amanye akhula phansi kwezihlahla, kanti amanye akhula ngokhuni ngesikhathi sokubola.
Ukucinga amakhowe, ukuwaqoqa nokuwapheka kuyindlela enhle yokuchitha isikhathi ngaphandle. Omunye wemisebenzi ongayenza Ekwindla ekuvumela ukuthi ujabulele uwedwa noma enkampanini yemvelo. Ngaphambi kokuba uqale kuyo, noma kunjalo, kunjalo kubalulekile ukwazi izinhlobo ezahlukene nokwazi ukuthi iziphi ezinobuthi futhi yiziphi ezidliwayo.
Kunezinhlobo eziningi zesikhunta futhi ezinye zingabulala uma zigwinyiwe, ngakho-ke ukuqala ngomuntu oyingcweti kule ndaba kungaba usizo olukhulu. Funda okubalulekile bese ungayeki ukuqeqeshelwa ukuqoqa amakhowe wesizini bese uwadle kahle.
Ingabe unayo ingadi? Jabulela ukwenza imisebenzi ejwayelekile yalesi sikhathi sonyaka. Susa noma yiziphi izitshalo noma okokutshala okunesifo ukuvimbela ukusabalala kwezinambuzane nezifo. Ngemuva kwalokho, thena ama-conifers kanye nezitshalo ezivuthiwe bese ufaka umquba ophilayo.
Lesi sikhathi sonyaka kubuye kube kuhle ukutshala ama-tulip, ama-hyacinth noma ama-daffodil ama. Ukuze ama-fall and unyaka aqhakaze entwasahlobo, uzodinga ukutshala ekwindla. Ungatshala nezimbali ezithile zonyaka ezifana nama-chrysanthemums, pansies noma i-heather ezohlobisa ingadi
Yebo, ngakolunye uhlangothi, ufuna ukuqala ingadiNgalesi sikhathi ungatshala isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi, i-broccoli, i-parsnip, isanqante noma isipinashi, kanye namakhambi anamakha afana ne-valerian, i-rosemary, i-thyme noma i-parsley.
Yimiphi yale misebenzi okufanele uyenze e-Autumn edonsa ukunaka kwakho kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Ukuzilibazisa » Imisebenzi engu-4 okumele yenziwe ngaphandle kwe-Autumn
I-Cascade braid: Thola ukuthi ungayenza kanjani ngendlela elula!
Izizathu zokuthi kungani ningaluthokozeli ucansi njengabantu abashadile